Faan Rag iyo Fiiro Dumar – Garanuug
Home / Sheeko Gaaban / Faan Rag iyo Fiiro Dumar
© Maxamed Cartan
Cabdullaahi Janno May 30, 2016	Sheeko Gaaban Leave a comment 25,874 Views
Waa saddex wiil. Waa guur-doon. Waa loollan. Gabadhu waa Shukri. Garasho leh iyo gar-soor. Waa bilic muuqato iyo billad loo tartamo.
Waa galabnimo iyo barxaddii Taalada Daljirka Daahsoon. Saddexdii wiilba hal hal ayay u yimaadeen. Shukri wiilashii ayay isbartay.
“Galabta waxaan xulanayaa lammaanahayga nolosha ,” ayay tiri Shukri. “Waxaanse rabaa in aan ogaado qof walba dhibtii ugu darneyd ee uu nolosha soo maray—iyo siduu uga baxsaday. Horaa loo yiri raggu jabkiisuu ka sheekeeyaa. Haye, yaa wax isku hayo?”
“Aniga i dhageyso,” ayuu yiri Nuur. “Ifka kama helaysid cid iga karti badan. Noloshaan aqaan—iyo sida la isku dabbaro.”
“Bal haddaba soo daa,” ayay tiri Shukri. “Markii aan mid mid idiin dhageysto ayaan ugu dambeyntii jawaab idin siin doonaa.”
“Gabbal-dhac iyadoo la joogo,” ayuu hadal ku billaabay Nuur, “ayaan adeerkay oo bakhaarle ah ka soo qalqaalsaday inuu ii dhammeystiro lacagtii tahriibta ee la ii soo qaaraamay intii ka dhinneyd. Wuxuu i yiri waan ka soo fekeraa. Lacag gaari-raac ahuu i soo siiyay, laakiin waxaan is dhahay dhaqaaleyso si aad ugu daawatid filin cusub oo soo baxay habeenkaas. Waan iska soo lugeeyay. Mise cabbaar ka dib waxaa luuq iiga hor yimid raxan eeyo dad cun ah. Way isoo bursadeen. Eydii oo sidii ii soo bursanayo ayaan laammiga weyn ku soo dhacay.
“Waxaan arkay gaari waddada socday. Gacantana u taagtay. Inkaarqabe dhallinyaro ah ayaa waday. Wuu ii istaagay. Wuxuu igu yiri gaarigaan hal mar ayaan joojiyay, mar labaadse ma joojinayo. Waxaan iri waayahay oo mar un eydaan iga fogee walaalow. Ilbaabka markii aan lugta labaad sii geli damcayba kabtii waxaa igala baxay ey dhareeraayay oo indho guduudnaa. Horaan ka xirtay ilbaabkii gaariga. Markii aan eydii ka soo fogaannay ayaan u duceeyay inkaarqabihii, oo iri walaalow gaariga ii jooji aan degtee.”
“‘Saaxiib gaarigan lama joojinayo,’ ayuu igu yiri. ‘Horaan kuugu digay.’”
“Suuye: ‘Markii aan fuliyo camalka barakeysan—oo aan madaxtooyada gaaro.’”
“Camalkee barakeysan?” ayaan iri anigoo indhaha galka ka bixinaya—tuhunna i galay.
“Iima uusan jawaabine wuxuu kor u feeday funaanaddiisa sidii qof ku faanayo six pack. Mise waaba bambooyin ku xirnaa calooshiisa. Wadnahaa afka i yimid.
“Walaalow i deji,” ayaan iri anigoo naxdin la dubaaxaynaya. “Waan ku tuugaa.”
“‘Ashahaado saaxiib,’ ayuu igu yiri. ‘Madaxtooyadii way soo dhowdahay.’”
“Ashahaado aah?! Anigaa?!!” ayaan la soo booday.
“Ima uusan fiirinayn, wuxuu indhaha ku hayay laammigii dheeraa.
“Walaalow xitaa igu celi eydii iyaga aanba orod uga baxsadee,” ayaan ka baryay. “Intaas lee asxaan iigu samee.”
“Inkaarqabihii iima jawaabin.
“Waxaa iga soo daatay duuf iyo illin. Saa waxaa ii soo muuqatay sartii madaxtooyadii. Ciidan AMISOM iyo kuwo Soomaaliyeed ayaa hor tubnaa. Wiilkii inta sheellaraha ku sii istaagay ayuu billaabay inuu dhaho Allaahu Akbar. Allaahu Akbar. Anna intaan indhaha isku qabsaday ayaan Ilaah ka baryay in hadduu iga badbaadiyo mixnaddaan aan joojin doono gabdhaha badan ee aan u sheekeeyo.
“Isla markiiba wuxuu Ilaah igu toosiyay inaan ilbaabkii iska furo oo aan bannaanka isku tuuro. Inkaarqabihii ima arkin, wuxuuna weli ku qeylinayay takbiirta isagoo burursan. Baas iyo baasuuke ayaa lagu furay. Isagii oo aan gaarin madaxtooyada ayay dileen.
“Jabkaas ayaan ka soo dabaashayee nimaan nolosha jab ka soo marin yuusan Shukriyeey kuu sheekayn.”
Macow dib dib ayuu isku reebay—oo isqaafiyay. Cali-xariif ayaa soo baxsaday.
“Wuxuu sheegaayo taano ma joogto,” ayuu yiri Cali-xariif. “Aniga iga dhageyso dhibta aan nolosha ka soo maray iyo sida aan isku dabbaray.”
Cali-xariif wuxuu hadalkiisa ku billaabay: “Shaqo-doon anigoo ah ayaan tahriib ku galay Sacuudiga. Waan iska lugeeyay. Habeennimo ayaa la galay. Harraad iyo tabar-darro ayaan la socon waayay. Waxaan ka soo dul dhacay tuulo yar.
“Gurigii iigu horreeyay ayaan ilbaabkiisa garaacay oo aan biyo weyddiistay. Waxaa iga furay nin maseyrlow ahaa. Markii uu arkay ninkeygaan madow ayuu la soo booday seef u surneyd derbiga. Oo i ceyrsaday isagoo leh xaaskayga dartaada ayaan magaaladii uga soo rarayee tuuladana ma iiga daba timid?
“Intaan sasay, oo tabar aanan laheyn iska raadshay, ayaan labo luuq ka dhex dusay. Markii aan ogaaday inuu iga haray ayaan laammigii dheeraa cagta soo saaray anigoo hinraagayo. Waan cabsanayay. Saa waxaa gadaasheyda ka soo ifay nal gaari.
“Anigoo naf ah ayaan gaarigii u istaagay bartankii waddada. Gaarigii wuu ii istaagay. Intaan sidii qof sarqaansan u soo dhaqaaqay ayaan darawalkii weyddiistay biyo aan cabo. Mise waa askar Sacuudiyaan ah oo uu hor kacayo ninkii maseyrlowga ahaa. Anna sidii inuu dhulku igu dhegay ayaan tallaabo rogi waayay. Askartii ayaa sidii haaddii iigu soo degatay. Waxaana ilbiriqsi gudihiis arkay anigoo dhex jiifo sagxaddii gaarigii ciidanka. Dharbaaxo iyo qanjaruufo ayay igu billaabeen. Kii maseyrlowga ahaa ayaa ii soo baxsaday oo hal feer ahna sanbuuqada igala helay. Miyir markaas ayaa iigu danbeysay.
“Waxaan soo kacay anigoo dhex jiifo sagxaddii gaariga, oo ay ciidankiina salaaddii cisho ku jiraan meel waddada geeskeeda ah. Qalbadda waxaa iga taabtay cod macaan oo uu maserylowgii ku akhrinayay Faatixada; wejiguna wuxuu la kaarayay feerkiisa. Intaan si tartiib ah uga degtay gaarigii, oo buraashad biyo ah horey u sii laacay, ayaan waxaan gaarigii kala baxay furihii. Meel mugdi ah ayaana ku tuuray. Markaasaan soo baxsaday oo waxaan Ilaah ka baryay haddii aan guuleysto inaan gudi doono xaqa gabdhihii aan soo furay. Wuxuuna Ilaah ila kulansiiyay darawal Soomaali ah oo ku tukanaayay masjid aan isku qarinaayay.
“Nuurna kulahaa eeyo ayaa i soo bursaday. Wadaayow nin waddankiisa uu libaax ku ceyrsaday wuxuu dhaammaa nin ay bisad ku ceyrsatay waddan dadow. Libaax dalkaaga joogo wuxuuba yaqaanaa haddii aad yur iska dhahdid, laakiin bisad joogto dal shisheeye yaa og inay yur u taqaanno kaalay i ceyrso oo i cun?”
Nuur iyo Cali-xariif waxa ay wada eegeen Macow.
Macow ma’uusan jawaabin. Calyadana liqi la’yahay. Waxaa ku dhegay hadalkii.
“War wiilka daaya,” ayay tiri Shukri. “Ma idinkaa u yeertay? Macow, noo sheeg mar un aad dhibtootay iyo sidaad uga baxsatay.”
“Ani horta subaxdii sharqaanle aan ahay,” ayuu yiri Macow. “Galabtiina ummaayadeey aan suuqa bajiye u geeyaa.”
Markuu intaa yiri ayay Nuur iyo Cali-xariif is eegeen, misana qosol isku cammireen.
“Macow ha u bixin,” ayay tiri Shukri. “Noo dhameystir sheekada.”
Macow loox soo taagan ayuu noqday. Waxaa ka tegay tabartii iyo nashaadkii ruuxda. Quusna ku sigtay. Nuur wuxuu mar kale kor u jiiday kulleetigii shaatigiisii isagoo is qaadqaadayo. Cali-xariifna wuxuu il-biriqsiyo ku dhuftay jaas iyo qoob-ka-cayaar.
“Nuur,” ayay tiri Shukri, “jabkaaga ka sheekaysaye hayeeshee waxaad jebisay hankii aan kuu qabay. Markii aad Ilaah barisay waxaad ku duceysatay inaad joojin doontid gabdhaha badan ee aad u sheekaysid. Haddaba aniga Shukri ahaan xiise iyo maaro uma hayo sheekeeye gabdho-shiriye ah. Iga raalli noqo wiilyahow.”
Nuur afkaa kala tegay. Sas iyo filanwaa. Juuqna ma oran.
“Macow, markii aan sheekadaada dhageystay,” ayay tiri Shukri, “waxaa ii soo baxday inaad tahay wiil jecel inuu shaqeysto oo iimaan ku qabo inuu dalkiisa ku qado ama ku dhergo. Xirfadna waad leedahay. Waxaad kaloo tahay xalaal miirad aan ku nooleyn shaxaad iyo booto.”
Macow neecow qabow ayaa laabtiisa dhex mushaaxday. Oo farxad la boodbooday. Intuu hoosta ka galay Nuur iyo Cali-xariif ayuu shafka ku riixay, oo misana riixay. Iyaguna dib dib ayay tallaabada u rogeen. Saa wuxuu u soo jeestay Shukri.
sheeko gaaban	2016-05-30
Tags sheeko gaaban
Previous Godob Jaceyl iyo Gallad Eebbe
Next Hubinta Sugnaanta Xadiiska